Vacuum Unguent Machine Vagadziri uye Vatengesi China Vacuum Unguent Machine Fekitori
Maumbirwo: Iyo vharuvhu inodzora musingaonekwi muchina unonyanya kuverengerwa hombe hari, poto yemvura, poto yemafuta, yekuzadza bin, kusanganisa system, kutonhora sisitimu, yekutsvaira system, jacking system, contrl system uye rack chikuva. Simbiso yehutano: Rimwe gore garandi. Hupenyu hwakareba sevhisi. Injiniya inowanikwa kushandira kunze kwenyika. Kushanda Musimboti: Mvura mbishi zvigadzirwa zvinotanga kugadziriswa uye zvakapararira muhari yemvura uye poto yemafuta, ndokuzopinda mune emulsification bhaira nepombi yekutsva; upfu mijenya iri mu f ...